Lego Super Heroes lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Lego Super Heroes lalao an-tserasera
Free Online Games Lego Superheroes mponina araka ny toerana tena mpilalao sy ny mpijery endri-tsoratra, izay efa imbetsaka nanaporofo ny tanjaka sy ny hery, herim-po sy azo antoka eo amin'ny raharaham-barotra. Ankehitriny milalao aminy ho eo amin'ny fomba Lego, izay mamela anao mba hanangona izay zavatra sy ny toetrany. Ny malaza izay fara heriko, Tsy Mety Resy Thor, Iron Man ary Ninja niady sasatry ny manohitra ny ratsy, manohitra ny fahavalo mampiasa fitaovam-piadiana faran'izay sy ny fahaizana manokana. Inona no ankizilahy dia malahelo ny fahafahana ho fizahan-toetra ny voninahitry ny mpiady mahery fo? Super mahery fo manana safidy vonona ho an'ny fitaovam-piadiana sy ho azy ireo, satria mora kokoa ny handresy miaraka.
Lalao Lego Superheroes tamin'ny Category:
Wolverine sy ny X-Men
Ny tsara indrindra Lego Super Heroes lalao an-tserasera
Lego: Ny fara heriko
Games Lego Superheroes dia manolotra ho anao ny maitso izay fara heriko, Iron Man, Kapiteny Amerika sy ny maro hafa malaza endri-tsoratra
Lalao Online Rehetra Lego Super Heroes lalao an-tserasera
Superheroes lasa mahazatra izany ho antsika sy ny akaiky, dia toa ny fahamarinana ka ho velona eo amintsika, mandeha eny an-dalambe, masquerading toy ny olon-tsotra, ary jereo avy ho an'ny olon-dratsy dia tsy maintsy ho voasazy noho ny heloka. Ny olona ary tsy mampaninona raha izany no mitranga, izany mpanampy mahafinaritra polisy, izay tsy afaka hiatrika amin'ny ny amin'ny meloka, izay be loatra.
mavitrika tetika ny lalao Lego Superheroes
Lalao Lego superheroes amin'ny ny fomba dia milaza ny tantaran'ny ny herim-po sy ara-drariny malaza mahery fo, izay manana hery tsy manam-paharoa, ary dia foana ao amin'ny toerana, raha misy zava-doza. Ianao antoka ny hahalala akaiky kokoa ny maha-Andriamanitra ny kotrokorana – Thor. Izy dia tsy maintsy hiady amin'ny ratsy Loki, fa tsy maintsy handrava aloha ny vahoaka ny fahavalo hafa izay tonga akaiky eo amin'ny lafiny rehetra. Ny fihetsehana ny tantara Niantoraka anao nivoaka avy tany amin'ny lapoaly any anaty afo, ary ny marina ihany no mpiady dia afaka handresy zava-tsarotra rehetra, tsy nisy indrafo handrava ny fahavalo ka aza adino ny fanangonana ny Bonus hevitra. Tsy misy fotoana haka aina sy hisaintsaina ny hetsika manaraka. Ny zava-drehetra mitranga haingana, sy ny tokony hamaly haingana.
Nandritra ny faran'izay Lego lalao ianao dia hahita Iron Man, izay misy fiantraikany eo ny fitiavany ny fiainana sy ny fomba afa-mandositra ny ambany fifehezan'i ny villains amin'ny lany rehetra mba hanasazy azy tamin'ny mafy izay rehetra azontsika atao. Ny fanafihana maro fahavalony, nefa izy-kerim-po mahatonga ny làlana mankany amin'ny tena fototr'izany, taorian'ny ady aminy – dia ny tapany farany ny asa nanirahana azy. Na dia eo aza ny hery rehetra ananan'ny Iron Man, dia tsy maintsy mitandrina ny mpanohitra tsy hita ny malemy toerana ka napetrany teo amin'ny lelany. Ho fitadiavana fanampiana farany, rehefa nanangona be loatra, dia afaka mampiasa ny manokana fanafihana amin'ny alalan'ny fihazonana nidina ny « hantsana », fa haingana mandevona ny hery ny ny toetrantsika, ka noho izany dia ho kokoa marina ny hisakana azy mandra-fihaonana amin'ny mpampiasa. Izany no mampidi-doza indrindra sy fahavalo misoko mangina sy tsy mahay mamono telo ny fitokonana araka ny marina ny toetrantsika. Ny fahafantarana izany, tandremo ny toe-draharaha eo ambany fanaraha-maso sy araka ny tokony ho hizarana miaramila. Na dia hitantana ny handrava ny mpanafika amin'ny toerana iray, dia tsy midika fa ny asa atao. Isaky ny mandroso eo, ireo vaovao miseho.
nisafidy litera ankehitriny mitovy amin'ny
Lego Super Heroes lalao dia tena voly izay hambabo ny gameplay, izay miala tanteraka tsy te. Ary rehefa mahita na Batman sy Superman tamin'ny kilalao iray, ianareo mahalala fa mampanantena voizin'olon-droa ity mahafinaritra maro niainany. Toetra amam-panahy tsirairay miady ny miaramila rehetra izay nanome azy ireo natiora sy ny vatolampy teo aloha. Nandresy ny mpanohitra, dia manokatra ny fidirana amin'ny hery vaovao izay mamela anao mba hanangona tombontsoa. Aza mihevitra fa ny fitomboan'ny hery hanao ny asa rehetra ho anareo. Izany dia fitaovana fotsiny fa manampy anao mba hanao faingana ka manao fanafihana fomba mahavariana, izay ny fahavalon'ny tsy manantena. Mahay mampiasa ny nahazo fahaiza-manao, ianao Azo antoka fa hamely ny fahavalony rehetra, ary tsy maintsy handresy.
Lalao faran'izay Lego hambabo tsy mahazatra, tsy misy dikany boky sary sy originality tany io kosa Eleazara. Avy eo dia nisy tantara mahazatra dia afaka hiseho tena tampoka, ary superheroes hiseho amin'ny andraikitra vaovao. Lego no tena mora volavolaina dia nanangona avy ny foto-kevitra sy ny zavatra tena mijery zava-misy, fa miaraka amin'ny mikasika ny ody. Milalao ny lalao Lego Superman, azo antoka fa misy ny faniriana ny hahafantatra tantara iray hafa ny andian-dahatsoratra sy mba handray anjara mavitrika ao aminy. Nanorim-ponenana eto ny malaza rehetra endri-tsoratra sy hanohy ny be herim-po dia ao amin'ny andraikiny vaovao, sy ny mpilalao tsy afaka miandry ny hiaraka amin'izy ireo sy hanampy eo amin'ny masiaka tsara ady ny rariny.